Izakhiwo eziwusizo ze-groats ye-buckwheat
Ezemidlalo Ukudla Ukulahlekelwa isisindo On porridges I-Buckwheat
Ukuze kuzuzwe isibalo esivumelanayo, abesifazane abaningi sebekulungele ukubuyela ezidlweni ezingavamile kakhulu. Izixuku ezifuna ukudla kuphela ukudla okunempilo zizoqeda ama-kilogram emikhiqizo yokudla emisha emashalafini esitolo. Akukona nje ukuthi ukukhangisa ngokuphawulekayo izimpawu zokuhweba ze "izimangaliso zokudla" ezisha kakhulu kuyinto eshibhile kakhulu, ngokuvamile umphumela wezempilo wokwamukelwa kwabo kungase kungabi khona. Ingabe kufanelekile ukuchitha isikhathi nemali ekuthengeni kwemikhiqizo izakhiwo zayo eziwusizo ezibangela ukungabaza ukuthi kunoma yisiphi isitolo kunezinto eziningi zokudla ezitholakalayo, izakhiwo zokudla ezaziwa ezizukulwaneni eziningi zabantu?
Kuhlu lwemikhiqizo yokudla engabizi kakhulu, enezakhiwo ezikhuthaza impilo, zihlanganisa zonke izinhlobo zokusanhlamvu. Emgqeni wabo, enye yezinto ezinomsoco kunawo wonke yi-buckwheat.
Ama-flavour of groats we-groak ayenziwa yizwe lonke ngamakhulu eminyaka. Kwakungelona lutho ukuthi isaga somuntu waseRussia sazalwa: "Isikhumba se-buckwheat siyazidumisa." Izakhiwo eziwusizo ze-groats ezibizwa nge-buckwheat zichazwa yizinto eziningi ezingxenyeni zokudla okunomsoco ezidingekayo empilweni yomuntu. Kwasungula ukuba khona kwama-protein amino acids (inani lazo zonke amagremu angu-100 okusanhlamvu cishe ngo-12 g), ama-carbohydrate (70 g ngalinye nge-100 g yomkhiqizo), amafutha (3 g ngalinye 100 g yomkhiqizo). Ehlanganiswe ezindaweni zokudla okunye okuthakazelisayo kunomhlaba owodwa oyithakazelisayo - abaphikisana kakhulu ne-oxidation. Ngenxa yalokhu kuhlaselwa kwekhaya kungagcinwa isikhathi esanele ngokwanele, ngaphandle kokwesaba ukuwohloka kokunambitheka kokusanhlamvu. Ngaphandle kwalokho, ku-groats okutholakala ngamagciwane kukhona eziningi ze-microelements eziwusizo empilweni - i-calcium, i-magnesium, i-phosphorus, nokuqukethwe kwensimbi lo mkhiqizo ungafaniswa ngisho nenyama noma inhlanzi. Ukutholakala kwamavithamini ekuguleni kwe-buckwheat kungenye isizathu sezindawo zayo ezizuzisayo. Ku-buckwheat wathola inani elikhulu lamavithamini eqenjini B (ikakhulukazi, B1 neB2). Ngokuqukethwe kwabo, ukukhishwa kwezinhlanzi kubaluleke kakhulu kunezinye izinhlobo zezitshalo. Izakhiwo eziwusizo zofulawa lwama-buckwheat zithole uhlelo lokusebenza emithini yomuthi. Isetshenziselwa ukulungiselela ama-poultices namafutha ekukhatheni izifo zesikhumba.
Ezitolo zokudla, ungathola izinhlobo ezimbili ezivame kakhulu zokudla okunye okufana nokunye okuncane: i-kernel kanye nokusika (itholakala ngokuchoboza izinhlamvu). Amathumba we-kernel okungenani amaminithi angu-30, futhi ukwelula kuyashesha kancane - kumaminithi angu-20. Lapho ulungiselela izitsha ezivela ku-groats okumele ulandelwe, kufanele ukhumbule ukuthi uma ubilisa, ivolumu yayo iyanda izikhathi eziningana uma kuqhathaniswa neyokuqala.
Ukusetshenziswa kwe-buckwheat ekudleni akubanga ukubonakala kwesisindo esingaphezu kwesisindo futhi akuhambisani nokuthuthukiswa kokukhuluphala, nakuba inani lamandla lomkhiqizo liyi-350 kcal ngamagremu angu-100 wezitshalo (okungenjalo kakhulu). Kungcono ukudla izitsha ezenziwe nge-buckwheat, ukudla kwasekuseni noma kwasemini - kulokhu, ama-carbohydrate aqukethe i-croup, kanti ukugaya kuzohlinzeka umzimba wethu ngamandla ngamandla ngosuku lonke lokusebenza.
Njengoba ubona, ukwazi ngezinto ezizuzisayo ze-groat groats ngeke kube yinto engcono kakhulu kubo bonke abathandi bokuphila okunempilo.
Futhi ekugcineni - ezimbalwa zokupheka izitsha eziwusizo futhi ezihlwabusayo kusuka ku-buckwheat.
I-porcelaire ye-buckwheat nobisi: ubilise ngamanzi amaminerali ngamanzi amaningi anosawoti, bese ukhipha amanzi angaphezu kwamanzi bese uwaletha ekulungeni, okupholile, ukwandisa ube ngamacwecwe bese ugcwalisa ubisi.
I-Krupenik kusuka ku-groats okuyi-buckwheat: upheke uketshezi oluthile ebisi, engeza ushizi ovuthiwe, ushukela oluhlaza, ushukela, usawoti, uxube, ufake efatsheni lokuthosa, uthele ukhilimu omuncu ubhake kuhhavini ngesigamu sehora.
Kungani wonke umuntu engakwazi ukulahlekelwa isisindo ekudleni kokudla okunye okuncane?
Indlela yokulahlekelwa isisindo ekudleni kokudla okunye okunye nokwenza isisindo?
Uyini umehluko phakathi kokususa kanye nama-Pilates?
Indlela yokulungiselela kangcono ukukhulelwa kwengane
I-Vanilla ihamba nge-jamberberry jam
Ngabe ucansi lungenzeka nini ngemva kokubeletha?
Inkulumo ekhanyekayo neVakhtang Kikabidze
Ukuma kwezindebe kanye nemvelo
Izakhiwo eziwusizo ze-jelly
Ikhekhe le-Orange nge-almonds
Indlela yokuvikela ingane kusukela ekushiseni kwelanga nokushisa
Izindlela zomphakathi zokukhulelwa masinyane
Ukunakekela isikhumba somsebenzi
Art Asian Culinary - iresiphi duck ekhaya Beijing
"Kina ngeke kube": U-Alina Kabaeva akatholakali kwifilimu ye-autobiographical
I-broccoli enomlilo ene-tofu
Kungani abesifazane bathanda ubulili ngomlomo?
Ubulili besifazane ngamehlo abantu